दबिएको राष्ट्रियता | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७६ पुष १८, शुक्रबार १२:२८ गते
म देख्छु, सधैँ यहाँ वर्षा दुख्ने गर्छ । त्यसै पनि हिमालभन्दा पहाड र पहाडभन्दा बढ्ता तराई दुख्छ, तर म देख्छु यो ‘म’कै बहुवचनबाट ज्यादा सृजित छ । त्यसो त, हाम्रो मुलुकको यो भूबनोट नै अत्यन्त नाजुक छ । त्यसमा पनि पहाडी क्षेत्र जुन समतलभन्दा अलिक भिरालो भूबनोटको छ, त्यस्तो नाजुक क्षेत्रका वृक्ष, बुट्यान र वनस्पतिको विनाश गर्नु म आत्मघाती देख्छु । अहिलेसम्म भइरहेको पनि छ त्यस्तै । भौगर्भिक अध्ययन नै भएन बरू त्यहाँको कोमल माटोस्थित बोट, बुट्यान र वनस्पति मासियो अनि खेती गरियो र आप्mनै खप्परमा दुःख वर्षियो ।
हुन त, हरेक वर्ष नयाँ बाटो र पुल बनाउने अनि पुरानो मर्मत गर्ने, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न बाँध बाँध्ने, सिंचाइका निम्ति नहर बनाउनेजस्ता कार्यका लागि अरबाँै रकम विनियोजन हुने गरेको सुनेको छु । सँगसँगै बजेटको दुरूपयोग भएको पनि उत्तिकै देखे सुनेको पनि छु । बक्राहा नदी नियन्त्रणको बजेटमा लामो हात गरेको पुष्टि भएपछि नेता खुमबहादुर खड्का जेल परेको देखेँ । मलाई लाग्छ, यो त एउटा कैयौँ लामालामा हातहरुको प्रतिनिधि बिम्बमात्र थियो । तर, त्यस्ता अनन्त पात्र छन्, जसको राष्ट्रघाती अन्तरगाथाको पटाक्षेप हुनै सकेन । निश्चय नै समय आएपछि साराका सारा रहस्य पर्दाबाहिर आउने म आजै त्यो दृश्य देखिरहेछु । पर्खनुपर्छ, अहिलेलाई धैर्य जरूरी देख्छु म ।
मलाई लाग्छ, कागजी संरचना तयार पारेर बजेट अपचलन गर्ने, नगरी नहुने स्थिति आए त्यसलाई झारा टार्ने गरी गर्ने, बाँध निर्माणमा उचित उपाय अवलम्बन नगर्ने, मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिने, पटकपटक सचेत गराइरहे पनि त्यसको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति, ठेकेदारहरुसँग मिलिमतो गर्ने र कमिसनका आधारमा काम गराउने प्रवृत्ति नयाँ होइन, त्यो पुरानै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले यसको स्थायी उपाय कहिल्यै खोेजेन, बरू खोज्नुभन्दा पनि यसलाई सधैँ हिन्दी भाषाको वाक्पद्धतिमा उल्लिखित ‘सोनेकी अण्डा दिनेवाली मुर्गी’ बनाइरहेको देख्छु म ।
म मात्र होइन सारा भन्छन् र आउने पुस्ताले पनि भन्नेछ कि नेताले आप्mनो देशलाई तल पारी कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धि गरे । कोशी नदीको मुहान चतरादेखि पुलसम्म बाँधिएको बाँधकै कारण हजारौँ किसानका लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि ताल पर्नाले कैयौँ किसान सुकुमबासी भए । ६० वर्ष बितिसक्दा पनि तिनले एकमोहर मुआब्जासम्म पाएनन् । दिन्छु भने पनि न सरकारले दिलाउन सक्यो न आपूmले दियो, धोकेबाज निस्क्यो भारत, जनता अझै आशमा ज्ञापन पत्र बोकेर हिँडिरहेछन् लिलिपुटका लघु मानवले झैँ । तर, पाउने आशा काकाकुलले पानीको प्यास तृप्तिका निम्ति आकाशतिर हेरेर बर्षादी पानीका निम्ति लालसा राखेझैँ देख्छु म ।
त्यही कोशीको प्रकाशपुर निकटस्थ तटबन्ध जब २०६६ सालमा भत्कियो तब हजारौँ मानिस जलप्रलयको लप्कामा लपेटिएको र सयौँ किसानका हजारौँ हेक्टर भूूमि मरूभूमिमा परिणत भएको दृश्य देखेँ । यो निकै दुर्दान्त थियो र त्यस्तै मुटुमा कसैले चिमोटेजस्तो अनुभूति हुन्थ्यो मलाई । साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्दा प्रत्यक्षरुपमा देखिएका यी परिदृश्यको आफैँ म भोक्ता र द्रष्टा हुनु नै पनि कैयौँ विषालु बिच्छीले डंक मारेको भन्दा कम पीडाबोध थिएन मलाई, झन् धनसम्पत्ति र आफन्तजन गुमाएकाहरुका लागि त यो दुःखान्त घटना थियो । नवलपुरबाट पुख्र्यौली थातथलो जाँदा–आउँदा यही पथ भएर हिँडेपिच्छे म क्षतिपूर्ति नपाएर अनाथ भई बसेका मान्छे देख्छु । बाढीका लप्कामा परेका मान्छेका आफन्त र त्यो उषरभूमि देख्छु, मलाई सधैँ चिन्ता हुन्छ । यहाँको माटोमा कताकति खरबुजाखेती गरिए पनि आज पनि यो भूमि मरूभूमिमय नै छ । यहाँका माटाको नेतृत्व र राष्ट्रि«य नेतृत्व दुवैको चाला देख्दा झन् दुःखानुभूति हुने गर्छ ।
थाहा थियो सम्बन्धित पक्षलाई कि बाँध भत्किनेवाला छ, तर गम्भीरतापूर्वक लिइएन । वृष्टि त आप्mनो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा मानवीय बद्नियतले पनि शताब्दीकै त्रासदीपूर्ण दुःखान्तता घट्यो । हरेक वर्ष पत्रकार सम्मेलनमार्फत हरेक वर्ष सुन्दै र देख्दै आएको छु, गण्डक नहरपीडित नागरिकका पीडा । उनीहरु भनिरहेका हुन्छन् कि भारत सरकारले नहर सफाइ गरेन । सम्झौताअनुरुप त के सम्झौताको एक चौथाइ पानी पनि दिएन । नहरका कारण कैयौँ गाउँ डुबानमा परे आदि । उनीहरुले नहरको बाँधसमेत भत्काए एक–दुईपटक । त्रिवेणी जाँदा मैले पनि देखेको छु, कैयौँ ठाउँ नहर मर्मत नगरिएर क्षतिग्रस्त रहेका कैयौँ ठाउँहरु । बालुवा माटोले पुरिएर माथिमाथिसम्मै आइपुगेको सतह । नहरमा पानी बगिरहेको तर किनाराका गहुँबालीहरु खडेरीमा परिणत भएको दृश्य पनि मैले कैयौँपटक देखेको छु । मेरो दृष्टिमा त चाहे कोशी, चाहे गण्डक दुवै सम्झौताबाट सबभन्दा प्रताडित छन् तराईकै नागरिक । सुख्खायाममा एकतुर्को पानी नचुहाउने तर वर्षामा बाँधका ढोका बन्द गरी प्राकृतिक बाटो छेक्ने र नेपालतिरको नहरमा बाढी पसाइदिने प्रचलनले तराईका जनता हरेक वर्ष आहत छन् ।
भारतले कैयौँ स्थानमा अन्तर्राष्ट्रि«य कानुन मिच्यो, दशगजामै बाँध बाँध्यो र अभैm कैयौँ स्थानमा जारी निर्माण गरिरहेको छ । उसले अग्लो ड्याम बनाई निर्माण गरेका पक्की सडकबाट नेपाली किसानका कैयौँ गाउँबस्ती र कृषिभूमि डुबानमा परेको दृश्यले कसको मन नरोला र ? बाँके हुँदै बग्ने राप्ती नदीको सीमावर्ती भूमिमा भारतद्वारा बाँधिएको बाँध, जुन लक्ष्मणपुर बाँधका नाउँले प्रसिद्ध छ । यही बाँधका कारण हरेक वर्षामा दर्जनौँ गाउँ डुबानमा पर्र्दै आएका छन् । कलकलुवा तटबन्धका नामले परिचित तटबन्ध यही लक्ष्मणपुर बाँधसँगै जोडेर भारतले २२ किलोमिटर लामो तथा ४ मिटर अग्लो बाँध निर्माण ग¥यो । जसका कारण त्यहाँ अथाह विपत्ति सिर्जना हुने गरेको छ तर भारतले नेपालसँग कुनै सोधपुछ गर्न आवश्यक पनि ठानेन । भारतको धार्चुला जिल्लाबाट बगेर आई नेपालको महाकाली नदीमा मिसिने नदीमा पनि भारतले बाँध बाँधेको छ । यही बाँध फुट्यो २०७० सालमा र दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम निल्यो । हेर्दाहेर्दै ठूला महलहरु धराशायी भएको त्यो दृश्य साँच्चै नै हृदयविदारक थियो । यसको पुनर्निर्माण हुनसकेको छैन अझै । दाङको सीमाक्षेत्रमा बग्ने दारा खोलामा भारतद्वारा निर्मित तटबन्ध हो कोइलाबास तटबन्ध । यसकै कारण करिब तीन हजार परिवार बिचल्लीमा पर्दै आएका छन् ।
२०५९ सालमा कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्मित १५ ढोकायुक्त ३० मिटरको बाँध जुन महलीसागर बाँधका रुपमा परिचित छ, यसकै कारण सुख्खा मौसममा समेत करिब १९१ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ । रुपन्देहीको मर्चवारनजिकै एकतर्फीरुपमा निर्मित रसियावाल खुर्दलौटन बाँधकै कारण कम्तीमा १८ गाउँबस्ती दुःखमा पर्दै आएका छन् । सिद्धार्थ नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं २ स्थित डन्डा नदीमा बनाइएको सात किमीमध्येको तीन किमी लामो तटबन्ध हजारौँ जनताको विरोधका कारण निर्माण स्थगित गरिएको छ, तथापि निर्माण पूरा भएका भूभागका नागरिकले भने सास्ती भोग्नु परिरहेको देख्दा मन औधी दुख्छ र दुवै सरकारप्रति आक्रोश र घृणा वमन गर्ने मन हुन्छ ।
रौतहटको लालबकैया र बैरगनिया बागमती तटबन्धका कारण औरही सिर्सिया, पुरेनवा, जयनगर, बन्जराहा, औरैया, बैरिया पिपरा गाउँपालिका तथा गौर नगरपालिकाले गम्भीर पीडा भोगिरहँदा पनि विरोधमा एक शब्द उच्चारण नहुँदा म आश्चर्यमा पर्छु । किन बोल्दैन नेतृत्व, किन मूक छ सिंगो तराई ? धनुषा र सिरहा जिल्ला भएर बग्ने कमला नदीमा निर्मित कमला तटबन्ध, सिरहा जिल्लामा निर्मित सिरहा तटबन्ध र सप्तरी जिल्लामा निर्मित खाँडो तटबन्धबाट उत्पन्न दुःख र वेदना पनि अवर्णनीय छ, तर पनि मौनता ? यो कस्तो मूकता ? सप्तरीमै निर्मित कुनौली तटबन्धबाट सप्तरीका दर्जनौँ गाउँपालिका प्रलयान्त वेदनामा छन् । मोरङ जिल्लास्थित बक्राह नदीमा निर्मित लुना बाँधकै कारण पनि कैयौँ नेपाली नबस्नु न छोडेर हिँड्नुको दुविधामा अल्झिरहेछन् ।
यीमध्ये थुपै्र गाउँ र झुपडीका अनुहारमा म देख्छु प्रलयान्त पीडाले मुस्कान छिनिरहेछ, तापनि खोक्रो हाँसोको अभिनय गरिरहेछन् उनीहरु । जन्मजात पीडा ओच्छ्याएर र ओढेर, पीडा र वेदना आस्वादन गरी पीडालाई नै आप्mनो जीवनपद्धति बनाइरहेका छन् । उनीहरु पीडा के हो ? वेदना र संवेदना के हो ? त्यो भावबोध गर्ने चैतन्यको प्राप्ति हुन सकेकै छैन, तिनलाई यो पीडा दिएको कसले ? त्यो ज्ञान कहाँ होला र ! जसले दिइरहेछ पीडा उसैलाई ईशामसिहा सम्झिएर तिनकै चाकडीमा अहर्निश समर्पित छन् उनीहरु । बरू, तटस्थ रहेको ईश्वरतिर धारेहात लाउँछन् । रगतको आँसु बहाउँछन्, तर वास्तविक पीडा दिनेबारे कहिल्यै खोजी गर्दैनन् । कथञ्चित् ज्ञान भए पनि विश्वास नै गर्दैनन् विद्रोह गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा, पहिलो कुरा त विद्रोह भनेकै जान्दैनन् उनीहरु ।
जीवन्त जीवन देखेर आजभोलि म थोरै खुशी छु र आशावादी पनि छु । कारण तिनले पीडकका कर्तुत बुभ्mन र अनुभूत गर्न थालेको देखेपछि । त्यतिमात्रै होइन निःशस्त्र विद्रोहको चिराग जलाउन थालेको सुनिसकेपछि । चाहे त्यो सीमा अतिक्रमणको शीर्षकमा होस् । चाहे त्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा उच्च ड्याम बनाएर गाउँबस्ती डुबानमा पार्दिएकाले होस्, चाहे नदीमा बाँध बाँधेर गाउँसहर उजाड बनाएपछि होस् या अत्याचार र दमनका नाउँमा होस् या नहर मर्मत र सफाइ नगरेको नाउँमा होस् । या नेपाली भूमि कब्जा गरी सैनिक अखडा बनाइएको कारणले होस् । साना–ठूला विरोध र विद्रोहको झिल्काझिल्कीदेखि दावानल उठिरहेको देख्नु र ती क्षेत्रमा थोरै धेरै जेजति भए पनि अधिकार प्राप्ति हुनु सकारात्मक सङ्केत हो भन्ने लाग्छ ।
जीवजन्तुको समाजमा ठूलो माछाले सानो माछा खाएको देखिएको छ भन्दैमा यही नीति चेतनशील ठहरिएको मानवसमाजमा पनि लागू गर्न खोज्नुलाई बेइमानी नमानेर कसरी प्राकृत मानूँ म ! त्यसमा पनि आर्य सभ्यताका केन्द्र ठानिएका भारतबाट त्यो पनि उही सभ्यताको उद्गम स्रोत देशमाथि । सामरिक शक्तिको आडमा । साधन, स्रोत र भौतिक सम्पदाको बलमा । दिनदहाडै सुस्ता, कालापानी, लिपुलेकहरु हड्पिएका छन् । हेप्नु, चेप्नु, हडप्नु र दलिल गर्नुको पनि एउटा हद हुन्छ, तर त्यो पार गरिदिएको छ साउथ ब्लकले सधैँ ।
मांसाहारी पशुलाई हाड देखाएर लोभ्याउँदा लोभिएर पुच्छर हल्लाउँदै पछिपछि आएभैmँ हाम्रो नेतृत्व कुर्सी देखाउँदा, एमबीबीएसको छात्रवृत्ति देखाउँदा लोभिएर लम्पसार पर्दा पनि विपत्ति एकपछि अर्को गर्दै आएको देखिन्छ । देश र जनतामाथि घात गर्नु आफैँमा घिनलाग्दो विषय हो भन्ने लाग्छ । व्यक्ति स्वार्थ र प्रलोभनमा परी देशलाई दुःखमा डुबाउनु नेतृत्वलाई सुहाउने कुरा थिएन । व्यक्तिगत स्वार्थ र मोह नभए हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व शक्तिशाली बन्दछ । नैतिक बल शिवको पाशुपत, नारायणको सुदर्शनचक्र र ब्रह्माको ब्रह्मास्त्रजत्तिकै अमोघ हुन्छ । यसको आंशिक लक्षण वर्तमान सरकार र प्रतिपक्षमा देखिरहेछु, तर आन्तरिक राजनीति र विश्वपरिवेशले कुन मोड लेला त्यो भविष्यमा निर्भर रहन्छ, तापनि राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीले गोरखापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा संवादबाट सबै विषय समाधान गर्न सकिने सङ्केत गरे पनि नेपालले निस्वार्थताका साथ आप्mनो कूटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने देख्छु म । सँगसँगै आत्मनिर्भरता, बलियो वैदेशिक सम्बन्ध, आर्थिक तथा भौतिक क्षमता विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देख्छु म ।